ရှက်ရှက်မှာ အနာပေါက်လို့ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ သားငယ် – Tameelay
ရှက်ရှက်မှာ အနာပေါက်လို့ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ သားငယ်
အဆိုတော် သားငယ်ကတော့ စအိုအတွင်း ပြည်တည်အနာဖြစ်ပြီး ဝမ်းမသွားနိုင်လို့ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ခွဲစိတ်မှုကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၅)ရက်နေ့ ညနေ (၅)နာရီက အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ အဆိုတော်မိုင်းမိုင်းဆိုင်းက ရွှန်းနောက်နောက် စာလေးရေးပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ သားငယ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောက်ကို with လုပ်ပြီး တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“ဝက်ကလေး Zaw Win Htun 5:00 မှာoperation လုပ်ပြီးပါပြီ.(စအိုအတွင်းထဲပြည်တည်အနာဖြစ် ဝမ်းသွားလို့မရလိူ့ခွဲတာပါ.)…ချောချောမွေ့မွေ့ပါရှင့်ခွဲရမှာကြောက်တာတဲ့ ခွဲခန်းရှေ့ထိ ပွစိပွစိလုပ်နေတာ..
ငမိုင်ငါ့ရှေ့ဘားမစားပြနဲ့တဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး ဝက်ရယ် ငါလည်းအိမ်သာထဲမှမစားတတ်တာ
အာရှတော်ဝင်မှာလူနာစောင့်ကူနေပါတယ်ဗျိုးး..” ဆိုပြီး စနောက်ကာ ရွှန်းနောက်နောက်လေး ရေးသားထား ဖြစ်ပါတယ်..။
အဆိုတော် သားငယ်နဲ့ အဆိုတော် မိုင်းမိုင်းဆိုင်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ မောင်နှမအရင်းတွေလို ခင်ခင်မင်မင်ရှိကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ေယာက် အမြဲ ချစ်ခင်စနောက်နေကြသူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်..။
Myanmar Idol Season(2) ကနေ စတင်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေလည်း ဖြစ်သလို လတ်တလောမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
အဆိုတျော သားငယျကတော့ စအိုအတှငျး ပွညျတညျအနာဖွဈပွီး ဝမျးမသှားနိုငျလို့ ခှဲစိတျမှု ပွုလုပျခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ..။
ခှဲစိတျမှုကိုတော့ ဖဖေျောဝါရီ(၁၅)ရကျနေ့ ညနေ (၅)နာရီက အာရှတျောဝငျဆေးရုံမှာ ခှဲစိတျမှု ပွုလုပျပွီးစီးခဲ့ပါတယျ..။
အဲ့ဒီအကွောငျးကိုတော့ အဆိုတျောမိုငျးမိုငျးဆိုငျးက ရှနျးနောကျနောကျ စာလေးရေးပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ သားငယျရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျအကောကျကို with လုပျပွီး တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
“ဝကျကလေး Zaw Win Htun 5:00 မှာoperation လုပျပွီးပါပွီ.(စအိုအတှငျးထဲပွညျတညျအနာဖွဈ ဝမျးသှားလို့မရလိူ့ခှဲတာပါ.)…ခြောခြောမှမှေ့ပေ့ါရှငျ့ခှဲရမှာကွောကျတာတဲ့ ခှဲခနျးရှထေိ့ ပှစိပှစိလုပျနတော..
ငမိုငျငါ့ရှဘေ့ားမစားပွနဲ့တဲ့ မတတျနိုငျဘူး ဝကျရယျ ငါလညျးအိမျသာထဲမှမစားတတျတာ
အာရှတျောဝငျမှာလူနာစောငျ့ကူနပေါတယျဗြိုးး..” ဆိုပွီး စနောကျကာ ရှနျးနောကျနောကျလေး ရေးသားထား ဖွဈပါတယျ..။
အဆိုတျော သားငယျနဲ့ အဆိုတျော မိုငျးမိုငျးဆိုငျတို့ နှဈယောကျကတော့ မောငျနှမအရငျးတှလေို ခငျခငျမငျမငျရှိကွပွီး တဈယောကျနဲ့ တဈေယာကျ အမွဲ ခဈြခငျစနောကျနကွေသူတှလေညျး ဖွဈကွပါတယျ..။
Myanmar Idol Season(2) ကနေ စတငျပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အခိုငျအမာ ရရှိပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အနုပညာမောငျနှမတှလေညျး ဖွဈသလို လတျတလောမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျတိုကျလုပျဆောငျနကွေတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကို အမေတစ်ယောက်ထဲကမွေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမလို ဆက်ဆံဖို့ အမြဲ သတိပေးခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ အမေ
ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကို အမေတစ်ယောက်ထဲကမွေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမလို ဆက်ဆံဖို့ အမြဲ သတိပေးခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ အမေ “သားလေး အားငယ်တာကို မစောင့်ပါဘူး.. အမြဲတမ်း အရင် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားဖို့ အားပေးခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကိုလည်း ညီအစ်ကို မောင်နှမလို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်ဖို့ သတိပေး ဆုံးမခဲ့တယ်” လို့ပြောလာတဲ့ Myanmar …
အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ သမီးလေးရဲ့ အသက်ကို ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေ
တစ်ချိန်တုန်းက ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးခြင်း ခံခဲ့ ရတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေ ဟာ အနုပညာလောက ထဲက နှစ်အတော်အကြာ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ” အသည်းကွဲသီချင်းတွေမဆိုတော့ဘူး ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရှေ့ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပါတယ် Single Mother ဘဝနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ သူမဟာ …
ကြည့်ရှုသူ ၃ သိန်းကျော်သွားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် ၊ ဇော်ကြီး နဲ့ နေခန့်မင်းသစ် တို့ ရဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် သီချင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးဟာ မကြာသေးခင်ကမှပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝင်းနားဆုရှင်အဖြစ် ဖြိုးမြတ်အောင်က ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာလည်း ပရိသတ်တွေအချင်းချင်း အပြိုင်အဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြပေမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကတော့ စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို စောစီးစွာ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အလျှောက် သူ့ရဲ့သီချင်းအချို့ဟာလည်း ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းက ပရိသတ်တွေကြား ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ …